विन्डोज १० 🥇 Emulator.online ▷ 🥇 मा टाइल गरिएको, स्ट्याक्ड वा स्ट्याक्ड विन्डोजहरू
विन्डोज १० ले स्वचालित रूपमा खुला विन्डोजहरू व्यवस्थित गर्न धेरै तरिकाहरू समावेश गर्दछ, तर तिनीहरू थोरै लुकेका छन् र टास्कबारमा केवल एक क्लिकको साथ पनि, यदि हामीलाई थाहा छैन भने, हामी तिनीहरूलाई सँधै पनि उपेक्षा गर्न सक्दछौं।
उदाहरणको लागि, विन्डोलाई एक तर्फ सार्दा, यो विन्डोज टाइल गर्न सम्भव छ स्क्रिनलाई दुई वा चारमा विभाजन गरेर (विन्डोजहरू कुनाहरूमा तान्दै)। तपाईं दायाँ माउस बटनको साथ टास्कबारमा खाली स्थानमा क्लिक गरेर र विकल्प प्रयोग गरेर समान गर्न सक्नुहुनेछ विन्डोज एक अर्को छेउमा राख्नुहोस्.
अझै दायाँ माउस बटन थिच्दै, तपाईं विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ स्ट्याक्ड विन्डोजहरू देखाउनुहोस्, जुन तिनीहरूलाई राख्नको लागि अर्को तरिका हो, समान रूपमा पर्दा विभाजन।
कुञ्जीपाटी सर्टकटको साथ, त्यसो भए तपाई कुञ्जीहरू सँगै प्रेस गर्न सक्नुहुनेछ विन्डोज + माथि तीर विन्डो विस्तार गर्न, कुञ्जी थिच्नुहोस् विन्डोज + डाउन एरो विन्डोलाई यसको सानो आकारमा फिर्ता गर्न र कुञ्जीहरू फेरि थिच्नुहोस् विन्डोज + डाउन एरो विन्डो न्यूनतम गर्न। टास्कबारमा।
विन्डोज १० को लागि पावरटॉयजस्ता प्रोग्रामहरूसँग, अतिरिक्त खुला प्रकार्यहरू सक्रिय गर्न सम्भव छ, जस्तै प्रत्येक अनुकूलित विन्डोको आकार र आकार छनौट गरेर अनुकूलन विन्डो लेआउट सिर्जना गर्न।
हामी अझै धेरै atriums पाउन सक्छौं विन्डोज डेस्कटपमा विन्डोजहरू संगठित गर्न युक्तिहरू.
यो लेखमा हामीले अर्को वास्तवमै उपयोगी, सजिलै प्रयोग गर्न सजिलो पत्ता लगायौं र त्यसले डेस्कटपलाई धेरै सहज बनाउँदछ: क्यासकेडि windows विन्डोजको सम्भावना, ताकि तपाईं डेस्कटपमा दश वा सो भन्दा बढी तितरबितर राख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूको शीर्षक देखेर ताकि तपाईं तिनीहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ। सबै सँगै र तिनीहरूलाई छिटो छान्ने।
विन्डोज १० मा तपाईं टास्कबारमा दायाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ "विन्डोज ओभरल्याप गर्नुहोस्"उनीहरूलाई स्ट्याक गर्न। सबै विन्डोजहरू तुरुन्तै कास्केडिading डाइग्नल स्ट्याकमा व्यवस्थित गरिनेछ, एक अर्कोको माथि, प्रत्येक समान आकारको। प्रत्येक विन्डोको शीर्षक पट्टी स्पष्ट रूपमा प्रदर्शित हुनेछ, यसलाई सजिलो बनाउनको लागि। माउस कर्सरको साथ तिनीहरू मध्ये एक क्लिक गर्नुहोस् र विन्डोलाई अग्रभूमिमा ल्याउनुहोस्। तपाईं अग्रभूमिमा ल्याउन टास्कबारमा सम्बन्धित आईकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ।
एक चोटि झरना सिर्जना भएपछि, यसलाई फेरि कार्यपट्टीमा दायाँ माउस बटन थिचेर र विकल्प चयन गरेर रद्द गर्न सकिन्छ "सबै विन्डोजहरू ओभरल्याप अनडु गर्नुहोस्"मेनूबाट। यसले विन्डोजको प्रबन्ध ठीक पहिले जस्तो थियो फर्काउँछ। जे होस्, यदि तपाईं कुनै एक भन्दा बढी ओभरल्यापि move विन्डोहरू सार्नुभयो भने, तपाईं क्यास्केड व्यवस्था अन्डु गर्न सक्नुहुन्न।
नोट गर्नुहोस् कि क्यासकेडि windows विन्डोज फीचर विन्डोज 95 in मा पहिले नै एक विकल्प थियो, जब कम्प्युटर संसाधनहरू सीमित र कम रिजोलुसन थिए। यस प्रकारको हेराई एक समान प्राप्त भएकोसँग मिल्दोजुल्दो छ, भर्खरै सम्म, एकै समयमा विन्डोज-ट्याब कुञ्जीहरू थिचेर (आज विन्डोज १० मा गतिविधि दृश्य खोलिएको छ)।
घटना लगबाट विन्डोज त्रुटिहरू ठीक गर्नुहोस्
सबै उत्साहीहरूका लागि चित्र र टेबलहरूका साथ मिनी कम्प्युटर गाइड
विन्डोजमा खाली फोल्डरहरू फेला पार्नुहोस् र मेटाउनुहोस्